Diabe Volomparasy Mampiray Ny Vehivavy Maleziana An’Arivony Manohitra Ny ‘Politika Manapoizina’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2017 5:34 GMT
Nanangona vehivavy efa ho an'arivony ny diabe volomparasy tao Kuala Lumpur. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Wanita Bantah Politik Toksik
Ny 10 septambra 2017, vehivavy an'arivony avy amin'ny sarangam-piainana rehetra no nivory tao an-drenivohitra Maleziana ao Kuala Lumpur hijoro ho fanoherana ilay antsoin'izy ireo hoe ny firongatry ny politika manapoizina ao amin'ny firenena.
Nanao ny “diabe volomparasy” ireo vehivavy ho fanamelohana ny fanavakavahana ara-pananahana, ny kolikoly, ny hosoka amin'ny fifidianana, ary ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Nanasongadina ny tsy fahitana firy ireo vehivavy eo amin'ny sehatra politika ireo mpandahateny nandritra ny fihetsiketsehana, sy ny tsy fahombiazan'ny parlemanta tamin'ny fanavaozana na fanafoanana ireo lalàna manavakavaka ny vehivavy toy ny lalànan'ny fampanambadiana ankizy, sy ny fanorisorenana antserasera ireo vehivavy.
Namintina ny lohahevitry ny hetsika i Datuk Noor Farida Ariffin, mpitsara sady diplaomaty misotro ronono :
Amin'ny maha vehivavy eto Malezia anay dia sahiran-tsaina noho ny fanapotehana ny demaokrasia eto Malezia izahay, amin'ny alàlan'ny herisetra atao amin'ny hetsika politika, amin'ny fampitam-baovao na antserasera. Koa satria tsy vitan'ny manampahefana ny mamaha ny olana dia mijoro manohitra ity firongatry ny politika manapoizina mampiahiahy ity izahay amin'ny maha vehivavy eto Malezia anay.
Tena mampanahy ny fanaovana sorona ny fahamendrehan'ny vehivavy sy ny mahasoa azy ireo ho an'ny politika sy ny propagandy.
Namaritra ohatra sasantsasany momba ny politika manapoizina ao Malezia ireo mpikarakara ny hetsika . (Midika hoe vahoaka ny “Rakyat” .)
Ireo ohatra amin'ny ‘politika manapoizina’ ao Malezia. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Wanita Bantah Politik Toksik
Nampihaona ireo olo-malaza maro izay nanakiana ny antoko mpitondra eo amin'ny fitondrana hatramin'ny taompolo 1950 ihany koa ny famoriam-bahoaka. Voampanga [mg] ho nanodina vola maherin'ny 600 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny alalan'ny orinasa fampiasam-bola an'ny fanjakana ny praiminisitra amperin'asa. Niteraka hetsi-panoherana [mg] nanerana ny firenena io fahafintohinana nateraky ny kolikoly io. Nitarika nankany amin'ny faneriterena ny fahalalaham-pitenenana ihany koa ny krizy ara-politika izay naterany taorian'ny nanomezan'ny governemanta baiko ny fanakatonana [mg] sehatra famoaham-baovao maromaro nitatitra momba ity raharahan-kolikoly ity.
Nanoratra momba ny maha-zavadehibe ara-politika ny diabe volomparasy i Wait A Minute Now (Andraso Kely Aloha), tranonkala iray miahy tena:
Tena tsy fahita firy izany. Mety hoe tsy betsaka angamba ny fahenoana ny hoe olona arivo, kanefa mampiseho izany farafaharatsiny ao Malezia, izay tsy tia loatra mahita hetsi-panoherana, fa mivoaka sy mampiaka-peo ireo vehivavy maro be herimpo sy fikirizana. Nanofahofa sora-baventy sy namerimberina hiaka ny vehivavy avy amin'ny sokajin-taona rehetra, tsy anavahana volonkoditra, fiaviana sy fironana ara-pananahana manantena fa ho ekena ho fitakiana fanovana ilay hetsika.
Kanefa nandrisika ny mpikarakara i Boo Su-Lyn, mpanao matoandahatsoratra, hiaiky fa mampahazo vahana ny mpanohitra politika ilay hetsika :
Tsy misy maharatsy ny fanohanana ny mpanohitra; tokony hanambara mazava ny tanjon'izy ireo momba ny fanovana ny fitondrana ny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena, fa tsy mody milaza izy ireo fa mpikatroka mahaleotena sy tsy mitongilana izay miady ho an'ny zon'ny Maleziana rehetra.
Nisy tokoa ny mpitarika ny mpanohitra tao amin'ny famoriam-bahoaka, saingy mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena sy vehivavy sivily izay manohana ny fanandratan-teny avokoa ny ankamaroan'ireo mpandray anjara.
Nampiasaina ny tenirohy #WanitaBantahPolitikToksik (Vehivavy manohitra ny politika manapoizina) mba hampiroboroboana ny hetsika sy hampiraisana ireo Maleziana amin'ny fanoherana ny politika manapoizina.
Ireto ambany ireto ny sary sasantsasany nandritra ny diaben'ny 10 Septambra sy ny hafatra firaisan-kina avy amin'ireo mpisera Twitter Maleziana:
Matetika ampiasaina mba hampanginana ny vehivavy tsy hilaza ny olany ny fanavakavahana ara-pananahana .
Adala ianareo raha manamaivana ny zatovovavy
Miara-mivory eto isika ho amin'ny tanjona iray ary amin'ny fanantenana ho an'i Malezia ho afaka amin'ny politika manapoizina
Eny an-kianja amin'izao diabe androany izao ny fitakiana tsy mila fanavakavahana amin'ny endriny rehetra – anisan'izany ny ara-pananahana!
Raha te hiaina ao amin'ny tontolo/firenena tsara kokoa ianao, dia mila manaja ny olona manodidina anao aloha ianao, indrindra ny vehivavy
We were at #WanitaBantahPolitikToksik in KL today and it was glorious 🙌🏼✨pic.twitter.com/QuoHq4UkW2
Tao amin'ny #WanitaBantahPolitikToksik tao KL izahay androany ary tena feno famirapiratana izany
Amin'ny 50% -n'ny mpifidy, manan-jo hanangana ny fandaharam-pirenena ny vehivavy. Mandà ny politika manapoizina izahay.
“Ry vehivavy, mitsangàna!
“Mitsangàna ho anareo ry vehivavy!” -
Tao amin'ny famoriam-bahoaka #WanitaBantahPolitikToksik tao KL androany (Vehivavy manohitra ny Politika Manapoizina)